Harka Mirgaa Kutuun akka Harki Bitaa darbannaa baruufi! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHarka Mirgaa Kutuun akka Harki Bitaa darbannaa baruufi!
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa kenname!
Uummatni Oromoo erga bittaa alagaa jalatti kufee bifa gurmuunis haa tahu qeenxeen wareegama lubbuu qaalii deebii hin qabne kaffalaa as gahe ammas kaffalaa jira. Oromoo fi Oromummaa Jiraachisuuf Qabsaa’ota Oromoo kitilootaan daa’ima kichuu irraa hanga manguddootti itti dhabaa turre ammas dhabaa jirra.
Impaayerri Itiyoophiyaa erga nagaan ishee boorahee kan bubbule yoo tahus waggoota sadii as haalli biyyattii keessatti addatti immoo Oromiyaa keessatti lammiilee biyyattii irratti raawwatamaa jiru haalaan sukkaneessaa tahuun guyyaa irraa gara guyyaatti taateewwan mul’ataa deeman hedduun argisiiftuudha.
Ajjeefamuu Artist Hacaaluu booda qabsaa’ota sabaa qaroo kan itti dhabne wareegama qaalii lubbuu kaffalanii kan darban yoo tahu gariin immoo mana hidhaatti darbatamaniiru. Sababaa ilaalcha sabboonummaa qaban qofaaf ummataaf dhaabbachuu, dubbachuu isaaniif dararaa hamaan irra gahaa jira.
Taateewwan kuni haala mariin ni furama jennee yaadnus haalli jiru hammaachuun Lammiileen biyyattii yaaddoo hamaaf saaxilamuu irra darbanii wareegama qaalii kaffalaa jiraachuu Addunyaan hubachaa wayita jirtu kanatti nagaa fi Tasgabbii Impaayera Itiyoophiyaa keessatti addatti immoo Oromiyaa keessatti jiraachisuuf walii galteen biyyaalessaa akka hundaayee ykn MCBO ijaaramee nagaa waaraan akka uumamuuf yaaliin godhamaa ture/jira. Amma qaamni humnaan ‘biyyan bulcha’ ofiin jedhu gurra kennuu didee jeequmsa waan filateef, biyyattiin dirree waaraanaa taatee goolamaa jirti.
Haaluma kanaan taateen guyyaa kaleessaa Caamsaa 3/2021 halkan keessa mana jireenyaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa irratti raawwatame haalaan sukkaneessaa fi miidhaa Hamaa kan qaqqabsiise tahuu biyyittiifis ummata Oromoofis addatti immoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsootti jiraniif hedduu rifaasisaa kan ture ammas haalli jiru yaaddessaa kan taheen wal qabatee baayyee rakkisaa taheera.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo ammatti qabsoon karaa nagaaf godhamaa ture karaa dhaaba Keenya ABO fi KFO guutummaa guutuutti balballi isaa cufamee jira waan taheef furmaanni maayii qabsoo Oromiyaa fi Oromummaa dandamachiisuuf ykn badinsa irraa oolchuuf akkasumas Qabsaa’ota qabsoo sabaa baraaruuf falli maayii warraaqsa tahuu hubatee jira.
Guyyaa kaleessaa Gamtaan Awurooppaa Filannoo Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamu taajjabuuf kan ture haquu isaa Marii paartiilee siyaasaa waliin godheen mirkaneessee jira. Akkasumas senetaroonni Amerikaa shan Filannoo ltiyoophiyaa gaggeessuuf jettu kan sirna ykn ulaagaa guute miti waan taheef dhiibbaa gama kamiinuu biyyi isaanii akka irratti gaggeessitu gochuun ni yaadatama.
Murni abbaa Irree Abiyyi Ahimed kan Qabsaa’ota Oromoo nyaatee dhugaa ture bara olaantummaa TPLF irraa eegalee hanga amma hoggansummaa isaatti dhiiga lammiilee hedduu ficcisiisaa jiraachuun akka biyyittiin nagaa hin arganne godhee jira.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Guutuu Oromiyaa keessa jirtan manneen barnootaa olaanoo irraa hanga gadiitti biyya keenya Oromiyaa badii irraa oolchuufii Qabsaa’ota sabaa lubbuu baraaruuf furmaanni maayii qabsoo tahuu bartanii warraaqsa qabsoon gaafattuuf akka sochii gootan waamicha keenya isiniif dhiyyeessina.
Ammaan booda mirga keenya kabachiifachuuf ilmaan Oromoo qaalii mana hidhaa jiran lubbuun oolchuuf Oromiyaa baraaruuf qabsoo bifa kamiin Qabsoo keenyaaf barbaachisaa tahe gargaaramuun warraaqsa keenya halkan guyyaa osoo hin jenne haala mijatuuf hin mijanne keessatti akka gaggeessinu waamicha Harmee Oromiyaa baraaruu fi Qabsaa’ota Oromoo lubbuu oolchuuf godhamu waan taheef bakka jirtanitti qabsoof gumaacha keessan akka finiinsitan waamicha isiniif goona.
Dhumni Abbaa Irree balleessanii baduudha waan taheef Qabsaa’ota qabsoo karaa nagaa falmatan ajjeesee hidhee fixee baduudha waan taheef biyya keenya badinsa irraa oolchuuf wareegamni tokko lamaan baasaa jiru lammiilee Oromiyaa hedduu kan yaaddeesse waan taheeef akka waloon wareegama kaffalamu hunda kaffalluuf qophii tahuu keenyaaf qabsoo keenya ni finiinsina.
Dhuma irratti Harka Mirgaa sirraa jiruun Harki bitaa akka darban as baruuf waan taheef Qabsaa’ota qabsoo sabaa hidhuu ajjeesuu dhabamsiisuun akka dhaloonni qabsichatti onnatee galma gahatuuf kan akeeku waan taheef dhaloonni qubee bakka jirtuu manneen Barnootaa Olaanoo hanga gadiitti,qotee bulaa hanga Daldalaatti, dafqaan bulaa hanga Barsiisaatti,Doktorootaa hanga saayinsistootaatti qabsoo Bilisummaaf godhamu keessatti qooda keessan akka bahattan waamicha isiniif goona!
Caamsaa 4, 2021